Madaxweynaha Puntland oo si kulul kaga hadlay falkii foosha xumaa ee lagu Dilay Caasho – Somali Top News
Madaxweynaha Puntland oo si kulul kaga hadlay falkii foosha xumaa ee lagu Dilay Caasho
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Dani ayaa cambaareeyay sidoo kalena tacsi u diray qoyska ay ka geeriyootay caasha, waxaana uu tilmaamay in haweenku yiihiin dadka ay ku jirto karaamada bini aadamka, wuxuu tilmamaay in ay yihiin laf dhabarta bini’aadamka iyo horumarka bulsho kasta.
“Dowladdu waxay ka qaadi doontaa talaabo deg deg ah cid kasta oo ku xad gudubta karaamada bini aadam ka iyo nolosha, Gabdhuhu waa walaalaheen, waa xaasaskeenii, waa hooyadeen, waa dadka runtii karaamadeenu ay ku jirto waxay u baahan yihiin in la dhawro”ayuu yiri Madaxweynuhu.
Caaisha Ilyaas waxay ahayd 12 sano jir muddo 7 maalmood ka hor ah ayaa la waayey raq iyo ruuxba, waxaana waalidkeed iyo ehelekoodu ay ku jireen baadigoobka gabadhaas yar. Waxaa dadka Gaalkacyo aragagax ku noqotey saakey markii meydka gabadha yar la soo dhigey meel ku dhaw gurigooda oo ku yaala Gaalkacyo.
Gabadha ayaa loo geystey jirdil iyo kufsi sida uu xaqiijiyey taliyaha qaybta gobolka Mudug, waxaana socda baaritaan sidii loo heli lahaa kuwa ka danbeeyey dilkan foosha xun.
← Gabar Soomaaliyeed oo lagu dilay Kenya, kadibna la jarjaray Meydkeeda
Madaxweynaha Koofur Galbeed oo ka hadlay shacabkii lagu laayay deegaanka Xaawo Cabdi →
Maxaa ciidan gaar ah loo geeyay magaalada Baydhabo?
Jaamacadda Carabta oo Soomaaliya ka taageereysa qorshe muhiim ah
Taliska Booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay baaritaanadii ugu dambeeyay iyo dad loo qabtay dilka Xil. Boqore